Voina · Aogositra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Aogositra, 2009
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Aogositra, 2009
Gresy 26 Aogositra 2009
Nisy doro tanety nitranga tany avaratra atsinanan'i Attica any Grèce ny zoma alina lasa teo, ary avy hatrany dia nandrava ala maro sy tanin'olona maro. Tao anatin'ny 2 andro monja dia nahazo ny faritra avaratra indrindra any Athènes ny afo, mampahatsiahy ny fahasimbana goavana nateraky ny doro tanety tamin'ny lohantaona...
Pero: Tsy mbola tafarina ny rava 2 taona aty aorian'ny horohorontany
Amerika Latina 20 Aogositra 2009
Feno 2 taona tamin'ny 15 aogositra teo ilay horohorontany nitranga tany atsimon'i Pero, voakasika indrindra tamin'izany ny faritry Ica, Pisco ary Nazca. Voakasik'izany ihany koa ny faritra manakaiky tendrombohitra hafa tahaka an'i Huancavelica. 2 taona izay no lasa taorian'iny horohorontany iny kanefa araka ny fantatra dia zara fa misy ny...
Taiwan: Potiky ny rivodoza Morakot ny faritra atsimon'i Taiwan
Taiwan (ROC) 13 Aogositra 2009
Nandalo tany Taiwan ny rivo-doza Morakot ny 07 aogositra 2009 lasa teo. Nampirisika ny mponina tany amin'ny faritra avaratra hiomana amin'ny fiavian'ny orambe sy ny rivotra mahery ny biraon'ny famantarana ny toetr'andro tany an-toerana. Kanjo ny faritra atsimo no nitondra faisana tamin'ny tondra-drano sy ny fahasimban'ny fambolena raha nampitahaina tamin'ny...
Bangladesh 11 Aogositra 2009
Teo am-panampiana ny tra-boinan'ny rivodoza Sidr tany Benlgadesh indrindra ny Uncultured Project (tetikasa ho an'ireo tsy voakolokolo ara-tsaina na atao hoe tsy mahalala fomba ihany koa) raha nijery ny takelany izahay tamin'ny herintaona, fa mbola tsy nitsahatra hatramin'izay ny ezaka nataon'i Shawn. Narary izy tamin'ny herintaona ka nody tany Kanadà...
Fipoahana bomba: nahafatesana olona sivy tany Indonesia
Indonezia 06 Aogositra 2009
Nisehoana asa fampihorohoroana indray tao indonezia [naotin'ny tonia:tamin'ny volana jolay]. Bomba roa no nipoaka tao Jakarta renivohitra indonezia tamin’ny zoma lasa teo. Araka ny voalazan’ ny vavolombelona dia tamin’ny 07:40 maraina no nahenoan’izy ireo ny fipoahana voalohany avy ao amin’ny JW Marriott, ary 2 minitra taorian’izany dia nirefotra ny bomba...